Bangiga Adduunka oo ansixiyay 143 milyan oo dollar oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Bangiga Adduunka oo ansixiyay 143 milyan oo dollar oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya.
Juunyo 23, 2022 10:38 b 0
Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay 143 milyan oo doolar oo loogu talagalay si loogu caawiyo dadka nugul ee Soomaaliyeed si ay uga gudbaan xaaladaha abaarta iyo cunno yarida sii kordhaysa ee dalka oo dhan.
“Xaaladdu waa murugo, Bankiga Adduunkana waxa uu sameynayaa wax walba oo uu ku badbaadin karo kuwa ugu nugul xilligan,” ayay tiri Kristina Svensson, maamulaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya.
“Waxaan ka faa’ideysaneynaa iskaashiga aan la leenahay hay’adaha bani’aadamnimada si loo yareeyo xaaladdaha abaaraha,” ayay raacisay.